Koonsartii deeggarsa Oromoota Walloo: Wellistuu, falmituu mirga namoomaa, aktiivistii fi jabeessituun hidda Oromummaa-Saliha Sami – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKoonsartii deeggarsa Oromoota Walloo: Wellistuu, falmituu mirga namoomaa, aktiivistii fi jabeessituun hidda Oromummaa-Saliha Sami
Koonsartii deeggarsa Oromoota Walloo: Wellistuu, falmituu mirga namoomaa, aktiivistii fi jabeessituun hidda Oromummaa Saliha Sami
Wellistuu, falmituu mirga namoomaa, aktiivistii fi jabeessituun hidda Oromummaa
artisti Saliha Sami yeroo dhihotti gara biyyaa dhufuuf deemti. Kan dhuftuuf waa malee miti. Koonsartii deeggarsa Oromoota Walloo biyya keessatti qopheessuufi.
Artisti Saliha Saamii kanaan dura hojiilee Oromoo fiIlmaan Oromoo walitti hidhuu danuu hojjachaa turte. Oromoota Walloo fi Raayyaa qabatamaan ilmaan Oromoo Oromiyaa keessa jiraataniin tan walitti hidhaa turteedha.
Artisti Saliha Saamii sirboota Oromoo kutaa maraa qabatamaan hawaasa keessatti arkamtee suur-sagaleen hojjachaa turuu madditti, seenaa fi aadaa gosoota Oromoo heddu kan waggaa dheeraaf addaan bade walitti deebisuuf mul’isaa turuun isii seenaa qabatamaadha.
Oromoota Walloo galii koonsartii irraa arkamuun deeggaruuf dhiheenyatti gara Oromiyaa dhufuuf qophiin marti xumuramee jira. Nutiis aartistii jaalatamtuu fi sabboontuu Saliha Saamii simachuuf qophii xumurree jirra, nagayaan nuuf koottu jennaan.